Fanamboarana fotodrafitrasa :: Hovitaina ao anatin'ny 18 volana ny lalam-pirenena faha-44 • AoRaha
Fanamboarana fotodrafitrasa Hovitaina ao anatin’ny 18 volana ny lalam-pirenena faha-44
Tanteraka tao Moramanga tao amin’ny kaominin’i Morarano ny fanombohana ny fanavaozana tamin’ny fomba ofisialy ny lalam-pirenena faha-44. Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, nanoloana an’ireo mponin’i Moramanga fa : «hovitaina ao anatin’ny 18 volana na herintaona sy tapany ity lalam-pirenena mampitohy an’i Moramanga sy Ambatondrazaka mirefy 159 km».
Notsindrian-dRajoelina Andry fa natao laharam-pahamehana ny fanamboarana an’ity lalam-pirenena ity amin’ny maha sompitr’
i Madagasikara an’iny faritra Alaotra Mangoro iny. Betsaka, araka izany, ireo tombontsoa ho azon’ireo mponina amin’ ny fahavitan’izany, indrindra fa ny famoahana ny vokatra vokarin’ireo tantsaha. « Tsy hijanona eo fa hitarina hatrany Marovoay hihazo an’i Vohidiala ny lalana », hoy ny Filohan’ny Repoblika.
Tsy ho gisitra
Fotodrafitrasa maro, toy ny fanamboarana hopitaly manara-penitra ao Moramanga, ny fanavaozana ny toera-pi­tsaboana ao Ambatondrazaka no hatao any amin’ity faritra ity. « Hisy ihany koa ny fano­kanana teti-bola 11 000 tapi­trisa ariary ho an’ny governo­ran’ny faritra ho fanorenana fotodrafitrasa ,any an-toerana”, hoy hatrany ny Filoha.
Nampihantainy amin’ny alalan’ny fanalana an’ireo olana manodidina ny fama­tsiana herinaratra ihany koa ireo mponina any amin’ny faritra Alaotra Mangoro. Hisy ihany fitrandrahana rano fisotro madio, ny fananga­nana sekoly manara-penitra, ny fampitomboana ny isan’ny mpitsabo ary ny fampitaovana an’ireo mpianatra any an-toerana. “Tsy ho gisitra intsony ianareo fa ho lohalaha­rana”, hoy Rajoelina Andry.
Fahatsiarovana tetsy amin’ny “Villa Elisabeth” :: Hivoy mandrakariva an’ireo hafatra napetrak’i Zafy Albert ireo akaiky azy